War-Saxaafadeed: Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka wuxuu ku maal-gelinayaa in ka badan $ 1.9 milyan afar beel oo reer miyi ah - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|War-Saxaafadeed: Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka wuxuu ku maal-gelinayaa in ka badan $ 1.9 milyan afar beel oo reer miyi ah
Deeqaha iyo amaahda dulsaarku waxay taageeri doonaan horumarka dhaqaale ee gobollada Clark, Grant, Mason iyo Yakima
OLYMPIA, WA - Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington (CERB) ayaa ansixiyay $ 1,988,750 oo deeqo ah oo loogu talagalay horumarinta kaabayaasha bulshada iyo daraasadaha suurtagalka dhaqaalaha ee lagu bartilmaameedsanayo kobaca ganacsiga iyo shaqo abuurka ee Degmada Clark, magaalooyinka George iyo Yakima, iyo dekedda Shelton.
·	Gobolka Clark - $ 50,000 oo deeq ah oo loogu talagalay daraasadda suurtagalnimada si loo dhammaystiro isku-darka horudhaca ah ee mashruuca I-5 / NE 179th Street. Qorshuhu wuxuu ka kooban yahay fikrad naqshad wax ku ool ah oo lala tashanayo Waaxda Gaadiidka ee Gobolka Washington (WSDOT), sahamin, moodeellada taraafikada iyo falanqaynta, qaabaynta iyo injineernimada, dhisidda iyo oggolaanshaha. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 25,000 ilaha maxalliga ah.
·	Gobolka Grant - $ 1.2 milyan oo deyn ah iyo $ 300,000 oo deeq ah oo loogu talagalay magaalada George ee loogu talagalay Warshadaha Xadiiqadda 5 ee hagaajinta nidaamka biyaha ee Shirkadda Qadiimiga ah ee Wine. Mashruucan lammaanaha ah ee gaarka loo leeyahay wuxuu ka kooban yahay naqshad iyo dhismo qiyaastii 6,000 fuudh oo ah 16-inji gudbinta biyaha ugu weyn, filtarka, rakibidda, dhinacyada, iyo dib u soo celinta dusha. Shirkadda Qadiimiga ah ee Wine Lake, LLC waxay ku maal-gelin doontaa $ 46 milyan xarun 9,000-tan oo ah khamri lagu farsameeyo, abuurista ama xafidaadda 55 shaqo oo rasmi ah mashruucan awgiis. Lacagta CERB waxaa la barbar dhigay $ 403,000 oo ah ilaha dadweynaha ee maxalliga ah.
·	Gobolka Mason - $ 160,000 oo deyn ah iyo $ 160,000 oo deeq ah oo la siinayo Dekedda Shelton si loo ballaariyo beerta warshadaha ee Johns Prairie ee Fraser MetalWorks. Mashruucan shuraakada ah ee gaarka loo leeyahay wuxuu ka kooban yahay beddelidda qaab-dhismeed dhererkeedu yahay 11,600-laba-jibbaaran oo loo beddelay dhisme isku-imaansho been abuur ah oo ay ku jiraan meel loogu talagalay soo-saaridda iyo tijaabinta shaashadda korantada ee korantada. Fraser MetalWorks wuxuu ku maal-gelin doonaa $ 1,269,500 $ 3,000-square-foot ballaarinta, mashiinnada iyo qalabka been-abuurka, waxayna abuuri doonaan ama hayn doonaan 69 shaqo oo joogto ah mashruucan. Deeqda CERB waxaa u dhigma $ 400,000 ilaha maxalliga ah.
·	Degmada Yakima - $ 50,000 ayaa la siiyaa Magaalada Yakima si loogu sameeyo daraasad macquul ah si loo sifeeyo fikradda suuqa dadweynaha iyo isku dhafka isticmaalka / jikada ganacsiga. Daraasadu waxay kahadli doontaa xulashada goobta ugu dambeysa, qaabeynta, sawirada fikradaha ah iyo miisaaniyada dhismaha ee lagu qiyaasay. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 16,667 ilaha maxalliga ah.
“CERB waxay leedahay 35-sano oo taariikh ah maal-gashiga mustaqbalka dhaqaalaha Washington iyadoo dhiiri galinaysa horumarin iyo balaarin cusub oo lagu daray shaqooyinka hada kajira gobolka. Mashaariicda ka socota George iyo Shelton ayaa tusaale fiican u ah adeegsiga CERB oo ah aalad horumarineed oo dhaqaale oo lagu taageerayo kobaca ganacsiga gobolka, ”ayuu yiri Guddoomiyaha CERB David Rhoden.
“CERB waa aalad muhiim ah oo gacan ka geysaneysa dadaalkeenna aan ku xoojineyno bulshada Washington iyadoo taageereysa koritaanka warshadaha. Mashaariicdan qorshayntu waxay tusaale u yihiin qoto dheerida iyo ballaadhnaanta iskaashiga gobolka iyo deegaanka ee loo baahan yahay si loogu diyaariyo goobo soo jiidasho leh oo loogu talagalay horumarinta ganacsiga mustaqbalka iyo shaqo abuur cusub, ”ayuu yidhi Brian Bonlender, oo ah Agaasimaha Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington.
Maaddaama ay tahay ilaha istiraatiijiga ah ee horumarinta dhaqaalaha Washington, CERB waxay diiradda saareysaa abuurista shaqooyinka shirkadaha gaarka loo leeyahay iyadoo lala kaashanayo dowladaha hoose iyadoo maalgelinaysa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Horumarintani waxay dhiirigalineysaa horumarinta ganacsiga cusub iyo ballaarinta. Marka lagu daro maalgelinta mashaariicda dhismaha, CERB waxay siisaa maalgelin xadidan daraasadaha qiimeeya mudnaanta sare leh mashaariicda horumarinta dhaqaalaha. Waxbadan ka baro CERB.
FARXADguddiga dib u soo nooleynta dhaqaalaha bulshadaDeeqaha bulshada iyo amaahdahorumarinta dhaqaalahamacquulnimada dhaqaalahaGobolka GrantkaabayaashaGobolka MasonSheltonSpokaneYakima
← Soosaarista Wararka: Ganacsigu wuxuu hogaaminayaa wafti ka socda Amsterdam si ay ugu soo bandhigaan METSTRADE qalabka badda soo bandhiga Nov. 15-17 Siideynta Wararka: Ganacsigu wuxuu ugu deeqayaa $ 485,000 dib u eegista deegaanka ee mashaariicda wax soo saarka bariga Washington →